ဖွံ့ထွားလှတဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အမိုက်စား ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ – Online News Post
ဖွံ့ထွားလှတဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို အမိုက်စား ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
By Cele PTPosted on June 11, 2021 June 11, 2021
အခု လက်ရှိ တင်ပေး လာတဲ့ နန်းမွေ့စံ ရဲ့ ပုံလေးတွေ ဟာ ဆိုရင် လည်း ပရိသတ် ရင်ကို ထိမှန်စေမှာ အသေ အချာ ပါပဲ နော်..။ မွေ့စံ ဟာ သူမ ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ မှာ “မကို ချစ်တယ် လို့ပြော “ဆို တဲ့ caption လေးနဲ့ လှသွေး ကြွယ်နေ တဲ့ ပုံလေး တွေ တင်ပေး လာခဲ့ တာပါ..။ ကဲ…. ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက် ပါတယ် နော်..။
နန်းမွေ့စံ ကတော့ အခု လက်ရှိ မှာ ဆိုရင် ပရိတ်သတ် တွေ ရဲ့ စိတ်ဝင် စားမှု အများ အပြား ရရှိ နေတဲ့ အနု ပညာရှင် တစ်ယောက် ပါ..။ သူ မဟာ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အချိုး အစား ကို လည်း ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ်ပြီး သူမ ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပုံရိပ် အလန်း တွေဟာ လည်း ပုရိသတွေ ရဲ့ ရင်ကို အမှန် အကန် ဟတ်ထိ စေတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။
နန်းမွေ့စံ ဟာ အခု ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် brand နဲ့ အကျႌတွေ ထုတ်နေ တာလည်း ဖြစ်ပြီး အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ ကို ဆက်တိုက် ဆိုသလို လုပ်‌ကိုင် နေတာ တွေ့ရပါ တယ်..။ နန်းမွေ့စံ ရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံလေး နဲ့ အလန်းစား ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းတွေ ဟာ လည်း ပရိသတ် တွေ ကြား မှာ ရေပန်း စား နေတာ ပါ နော်..။နန်းမွေ့စံ ဟာ မကြာသေး မီ ကလည်း သူမ ရဲ့ အလန်းစား ပုံလေးတွေ ကို social network မှာ မျှဝေ ပေးလာပြန်ပါ တယ်…။
အခု လက္ရွိ တင္ေပး လာတဲ့ နန္းေမြ႕စံ ရဲ့ ပုံေလးေတြ ဟာ ဆိုရင္ လည္း ပရိသတ္ ရင္ကို ထိမွန္ေစမွာ အေသ အခ်ာ ပါပဲ ေနာ္..။ ေမြ႕စံ ဟာ သူမ ရဲ့ Facebook စာမ်က္ႏွာ မွာ “မကို ခ်စ္တယ္ လို႔ေျပာ “ဆို တဲ့ caption ေလးနဲ႔ လွေသြး ႂကြယ္ေန တဲ့ ပုံေလး ေတြ တင္ေပး လာခဲ့ တာပါ..။ ကဲ…. ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ ပါတယ္ ေနာ္..။
နန္းေမြ႕စံ ကေတာ့ အခု လက္ရွိ မွာ ဆိုရင္ ပရိတ္သတ္ ေတြ ရဲ့ စိတ္ဝင္ စားမႈ အမ်ား အျပား ရရွိ ေနတဲ့ အႏု ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ပါ..။ သူ မဟာ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳး အစား ကို လည္း ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ၿပီး သူမ ရဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ပုံရိပ္ အလန္း ေတြဟာ လည္း ပုရိသေတြ ရဲ့ ရင္ကို အမွန္ အကန္ ဟတ္ထိ ေစတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။
နန္းေမြ႕စံ ဟာ အခု ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ brand နဲ႔ အက်ႌေတြ ထုတ္ေန တာလည္း ျဖစ္ၿပီး အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ေတြ ကို ဆက္တိုက္ ဆိုသလို လုပ္‌ကိုင္ ေနတာ ေတြ႕ရပါ တယ္..။ နန္းေမြ႕စံ ရဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ ပုံစံေလး နဲ႔ အလန္းစား ဖက္ရွင္ ဒီဇိုင္းေတြ ဟာ လည္း ပရိသတ္ ေတြ ၾကား မွာ ေရပန္း စား ေနတာ ပါ ေနာ္..။နန္းေမြ႕စံ ဟာ မၾကာေသး မီ ကလည္း သူမ ရဲ့ အလန္းစား ပုံေလးေတြ ကို social network မွာ မၽွေဝ ေပးလာျပန္ပါ တယ္…။
Previous post ညို့အားပြင်း ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ အသည်းယားဖွယ် ကောင်းနေတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ပုံရိပ်လေးများ
Next post ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ မော်ဒယ်လ် Mဆိုင်းလုရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးများ